बाँके जिल्लामा पर्यटनका संभावनाहरु - Nepalgunj Business
बाँके जिल्ला साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र हालको प्रदेश नं. ५ मा रहेको जिल्ला हो । यसले नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्य २२५८ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल ओगटेको साथै २७० ५१’ देखि २८० २०’ उत्तरी अक्षांश र ८१० २९’ देखि ८२० ८’ पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित छ । जिल्लाको सरदर उचाई समुद्री सतहबाट ७०८.७५ मी. भएपनि सदरमुकाम नेपालगंज १४९ मी. उचाइमा छ । यो जिल्ला बाँकेको उत्तरमा दाङ्ग र सल्यान, दक्षिणमा भारत पूर्वमा दाङ्ग र भारतीय सिमाना तथा पश्चिममा बर्दिया जिल्लाको चौघेरामा रहेको छ । राजनैतिक एवं प्रशासनिक हिसाबले ३ प्रतिनिधी सभा क्षेत्र, १ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका रहेका छन् ।
पर्यटन : परि उपसर्गमा अटन प्रत्यय लागेर पर्यटन बनेको हो । जसको अर्थ ‘परको वातावरण’ बुझ्ने भन्ने बुझिन्छ । नयाँ ठाउँ घुम्ने, मनोरञ्जन गर्न, भाषा संस्कृति कला रहनसहन आदिको अध्ययन अवलोकन गर्ने र विविध पक्षको जानकारी लिन मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रियालाई पर्यटन भनिन्छ । नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण प्राचिन कला र संस्कृतिको संगम स्थल साथै धेरै जंगली जनावर र चराचुरुङ्गिहरुको बासस्थान भएको कारणले गर्दा पनि पर्यटनको लागि गन्तव्य स्थान बनेको छ ।
बाँके जिल्ला पश्चिम नेपालको तराइमा रहेको जिल्ला भएता पनि यहाँ पर्यटनका प्रचुर संभावनाहरु देखिन्छन् । जसको विकास तथा विस्तारले यहाँका मानिसहरुको आय आर्जन, रोजगारीमा वृद्धी भई समग्र जिल्लाको आर्थिक गतिविधिमा टेवा पु¥याई देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस जिल्लाका पर्यटन संभावनाहरुलाइ निम्न अनुसार देखाउन सकिन्छ ।
१) साँस्कृतिक पर्यटन
यस जिल्लामा विभिन्न जातजाति, भाषा भाषी, धर्म मान्ने मानिसहरुको बसोबास रहेको छ । यहाँ विशेष गरी अवधी भाषी, थारु भाषी, उर्दुभाषी हरुको बाहुल्यता भएको पाईन्छ । उनीहरुको आ–आफ्नै चाडपर्व, भेषभूषा कला संस्कृति भएको कारणले गर्दा यस जिल्लाले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्छ ।
२) धार्मीक पर्यटन
यस जिल्लामा रहेको बागेश्वरी मन्दिर नेपालको प्रमुख धार्मिक स्थल मध्येको एक हो । यस मन्दिर परिसरमा रहेको तलाउको विचमा अवस्थित जुगेँ (खडेश्वर) महादेवको मूर्ति सहित मन्दिर नेपालकै प्रख्यात मन्दिर हो । यसै गरी मुस्लिम धर्मालम्वीहरुको मस्जिद र शिखहरुको गुरुदवारा पनि यस जिल्लामा रहेको छ । यसरी स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजनहरुलाई यि मन्दिर, मस्जिद र गुरुदवाराहरुले आकर्षक गरेको पाइन्छ ।
३) औद्योगिक पर्यटन
यस जिल्लाको सदरमुकाम नेपालगंज औद्योगिक नगरीको रुपमा परिचित छ । नेपालगंज उप–महानगर भित्र औद्योगिक क्षेत्र रहेको छ जसमा विभिन्न किसिमका उद्योग कल–कारखानाहरु संचालनमा रहेका छन् । जसले सयौ स्वदेशी–विदेशी नागरिक रोजगार प्रदान गर्दै आएको छ । यसैगरी नेपालगंज कोहलपुर सडक खण्डमा उपमहानगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाको सिमानामा पनि धेरै उद्योगहरु संचालन हुदै आएका छन् । यसैगरी यसै जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिकाको नौवस्तामा ःभनजब क्ष्लमगकतचष्ब िक्तबतभ पनि शुरु हुदैछ । तसर्थ उद्योग–व्यवसाय प्रति अभिरुचि राख्ने पर्यटकलाई पनि यो जिल्ला गन्तव्य स्थल बन्ने संभावना रहेको छ ।
४) गुणस्तरिय होटल :
पर्यटकका लागि सबैभन्दा आवश्यक होटेल हो । जसले सन्तुलित भोजनका साथै सुरक्षित बास स्थान दिन्छ । यस जिल्लामा अत्यन्त उच्च स्तरका होेटेल छन जसले स्वदेशी तथा विदेशी भोजन उपलब्ध गराउनका साथै वातावरण अनुकुलका सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैगरी यहाँ मध्यम स्तरका र न्यून स्तरका होटेलहरु पनि रहेका छन् । यसको फलस्वरुप आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको आफ्नो क्षमताअनुसारको आवश्यकता पूर्ति गरी पर्यटकहरुलाई सन्तुष्टि दिन सक्छन् ।
५) बोटानिकल गार्डेन : यस जिल्लाको पूर्वी भागमा रहेको महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको ढकेरीमा यो गार्डेन पर्दछ । यहाँ विभिन्न किसीमका वनस्पतिहरु राखिएका छन् । बनस्पतिसंग सम्बन्धित पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सक्ने गन्तव्यको रुपमा यसलाइ लिन सकिन्छ । भविष्यमा यसलाइ वनस्पति विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न सकिने संभावना पनि रहेको छ ।
६) शैक्षिक गन्तव्य : यस जिल्लामा एक मेडिकल कलेज, एक त्रि.वि. को आंगिक क्याम्पस त्यस परिसरमा रहेको क्षेत्रिय पुस्तकालय, एक दर्जन भन्दा बढी साधारण तथा प्राविधिक निजि तथा सामुदायिक कलेजहरु र सयौ सरकारी तथा निजि विद्यालयहरु रहेका छन् । जसमा स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन । शिक्षा सम्बन्धी चाख राखि यस क्षेत्रको अध्ययन गर्ने पर्यटकका लागि पनि यो जिल्ला गन्तव्य स्थल हुन सक्दछ ।
मनोरञ्जन पर्यटन : यस जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसीमका मनोरञ्जन स्थलहरु छन्, जहाँ पुगी पर्यटकहरु मनोरञ्जन लिइ समय व्यतित गर्दै आनन्द लिन सक्नेछ ।
– नेपालगंज उपमहानगर भित्र रहेको महेन्द्रपार्क जसलाई ‘मिनि चिडियाखाना’ पनि भनिन्छ । यहाँ गएर पर्यटकहरुले विभिन्न किसीमका चराचुरुङ्गी र जनावरहरु हेरी मनोरञ्जन लिन सक्नेछन् ।
– उपमहानगर भित्र नै रहेको निर्माणधीन रानी तलाऊ निर्माण पश्चात पर्यटकहरुले डुंगामा शयर गरी मनोरञ्जन लिन सक्नेछन् ।
– उपमहानगर भित्र नै रहेको निर्माणधीन वाटरपार्क जुन सुर्खेत रोडको छेउमा छ । निर्माणपश्चात पर्यटकहरु डुंगामा शयर गरी चारैतिर रहेको वस्तीलाइ अवलोकन गरी मनोरञ्जन लिन सक्नेछन् ।
– कोहलपुर नगरपालिका भित्र रहेको कोहलपुर बजारदेखि पूर्वतिर निर्माण भएको भ्यू टावर जसमा गई पर्यटकहरुले कोहलपुर बजारको साथै छेउछाउको जंगलको मनोरमा दृश्य अवलोकन गरि मनोरञ्जन लिन सक्नेछन् ।
– यस जिल्लामा रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज बाघको मुख्य बास स्थान हो । बाघ लगायत अरु जंगली जनावर अवलोकन गरि मनोरञ्जन लिने पर्यटकका लागि यो गन्तव्य स्थल हुन सक्दछ ।
– यस जिल्लामा क्षेत्रीय विमानस्थल रहेको, उक्त विमान स्थलबाट रारा ताल लगायत कर्णाली अञ्चलमा मनोरम प्रकृती, सौन्दर्य, अवलोकन गर्न चाहने पर्यटकका लागि पनि यो गन्तव्य स्थान हुन सक्दछ ।
तसर्थ यस जिल्लामा पर्यटनका लागि प्रशस्त संभावनाहरु देखिन्छन् । यहाँ रहेका धेरै पर्यटक स्थलहरु जीर्णद्धार रुपमा भेटिन्छन् । उक्त पर्यटक स्थलहरुलाइ सरोकारवालाहरुले समयमै ध्यान दिइ तीव्र रुपमा निर्माण गरी पर्यटकहरुलाइ आकर्षित गरेमा पर्यटनकै माध्यमबाट स्थानीय सरकारको आम्दानी वृद्धि हुनुका साथै स्थानिय जनताको आय आर्जन, रोजगारीमा तथा व्यापार व्यवसायमा वृद्धि भई समग्र जिल्लाको आर्थिक विकास हुन सक्ने प्रचुर संभावना रहेको देखिन्छ ।
(लेखक : नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यालय प्रमुख हुन ।)
प्रकाशित मितिः आइतवार, चैत्र २४, २०७५ 2:18:12 PM